Ahụmahụ Semalt: Gịnị mere Thunderbird ghọtara Email m dị ka spam?
Enwere ihe bara uru Mozilla mụtara mgbe ha zipụrụ akwụkwọ akụkọ kwa ọnwa nye ndị ha debanyere aha ha. Isiokwu na-esonụ ga-achọ ịkọkọrịta ihe a. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị mmadụ na-eji onye ahịa ahịa email Thunderbird si Mozilla natara akwụkwọ akụkọ ha na nke a. Na njikere gụọ na Thunderbird chere na ozi ezitere bụ ojoro email.
Ivan Konovalov, Semalt Onye ahịa na-aga nke ọma, na-ekwu na eziokwu ahụ bụ na ụlọ ọrụ ahụ ebughị n'uche iji mee ka onye ọ bụla na-eji ndụmọdụ ha na mmelite ọ bụla na weebụsaịtị ha, nke ha zigara ndị ọrụ iji ozi ha. Ọ dugara ha ịjụ onwe ha ihe ha mejọrọ - ssh brasil gratis.
Mgbe ha tụlechara nsogbu ahụ ma mee ka mmadụ ole na ole tweaks, ha chọpụtara na usoro ahụ na-ebute ncheta mgbe ọ bụla ọ chọtara URL na HTML nke email. Otu nsogbu ahụ na-emetụta mmemme ndị ọzọ dị ka Outlook na Entourage email. Enweela mkpesa yiri nke a nke nsogbu Thunderbird si n'aka ndị ahịa ha.
Nsogbu nke Thunderbird si na windo emelitere bụ n'ihi na ha agbakwunyela ozi ahịa ha na ozi ha. Ha tinye ederede banyere National Wildlife Federation. Ebumnuche bụ inweta nkwado nkwado maka nzukọ, na ichebe anụ ọhịa na gburugburu ha. Na njedebe nke ederede, URL bụ na ebe nrụọrụ weebụ ha maka onye ọ bụla chọrọ inye onyinye maka ihe kpatara ha.
Ọ bụ ezie na mgbe mmadụ na-agbakwụnye njikọ ederede na ozi email na-abụghị ihe spam, ọ nwere ike ịhapụ ụfọdụ ndị na-agụ ya. Ya mere, a ka na-enyefe onye na-anata ozi email ahụ. Ọdịdị nke ederede ahụ dịkwa mkpa.
Mozilla dị mma-gere ihe ederede ahụ iji gụọ otu ma wepụ akụkụ ahụ ebe e nwere URL. Kama ịrịọ ka ndị mmadụ nye onyinye na ebe nrụọrụ weebụ a kapịrị ọnụ gosiri n'elu, ha gwara ndị ọ bụla nwere ọchịchọ inye onyinye taa. Mgbe tweaking nke a, obodo Thunderbird dara jụụ. Ọ bụ ihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụkwa ihe ha na-ekwesịghị ikwu.
Ụzọ ọzọ ha nwere ike isi gbochie nsogbu ahụ site na nchịkọta bụ iji tinye njikọ ahụ site n'iji mgbati cm_dontconvertlink. Nkọwapụta Phishing na-arụ ọrụ site n'ịgbalị iji ya tụnyere URL ahụ, na URL ahụ ọ na-agba mbọ ijikọta ya. Ọ bụrụ na ha adaghị, usoro ịdọ aka ná ntị na-emeso ya dị ka ntụgharị phishing ma ya mere pop si na ọkwa ndị a. Site na ịgbakwunye mgbatị ahụ e kwuru n'elu gaa njikọ na-ekwupụta ngwa ahụ iji chọpụta njikọ ahụ ma ọ bụ mee ka ọ pụta ìhè. Na nkenke, ha ga-ahapụ naanị ya. N'ihi ya, ọdịiche dịka nke a na-akpọ Thunderbird email adịghị ebili ọzọ.
Nanị ihe ga-eme ka ihe ngwọta ahụ bụ na ihe ọ bụla clicks na njikọ dị na ozi-e apụtaghị na mgbalị mgbasa ozi ahụ. Ha agaghị egosiputa na akụkọ ndị na-eme nnyocha.
Omume nke akụkọ a, site na ikpe Thunderbird, bụ na ndị mmadụ, ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ekwesịghị ịgụnye ozi ọ bụla na ụdị ozi email ha chọrọ iziga. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe dị mkpa ka ha mee nke a, ha ga-agbanyụ nsonaazụ URL ahụ. Ma ọ bụghị ya, Thunderbird ga-eme ma mesoo email dị ka spam.